फेब्रुअरी सोची मा छुट्टी: तस्बिर र समीक्षा
सोची शीतकालीन आनंद से यसको खालीपनको र सौहार्द गरेर हैरानी। जुलाई मा overcrowded थिएन जो सडकमा, चिसो रात को अघिबाटै जान्ने काम मा स्थिर।
यस अवधिमा numbness, महिना मात्र एक जोडी रहन्छ किनभने सोची - एक लोकप्रिय स्की रिसोर्ट। के आश्चर्य एक जाडो शहर भ्रमण तयार? के हेर्न र कहाँ वर्ष को यो समय मा जाने?
सोची मा! फेब्रुअरी?
संग पहिलो परिचय लागि ओलम्पिक खेल को राजधानी 2014 मा ऐतिहासिक चौथाई मार्फत सबै भन्दा राम्रो फिट आरामपूर्वक टहलने छ। फेब्रुअरी सोची रंग को चमक हरियो ट्रपिकल वनस्पति रसीला असर गर्छ।
अगस्ट मा Pozhuhshie र खजुरका prihoroshilis र स्वागत यात्री गाढा fleshy पात चमक। यहाँ र त्यहाँ languidly हात समातेर आरामपूर्वक टहलने प्रेममा एक जोडी। Impressively बच्चाहरु संग आमाबाबुले strode।
मलाई विश्वास छैन? फोटो हेर्न!
मौसम सोची मा फेब्रुअरी, घाम दिन को एक प्रशस्त द्वारा प्रतिष्ठित। औसत तापमान +8 ° सी मा मा भिन्न अक्सर हावा + 15 ° सी मा गरम छ यो रात मा कूलर हुन्छ, तर थर्मामीटर कहिले काँही मात्र तल0° सी खस्छ
ठण्डा परम्परा को हिमाल मा। एडलर, सोची, Matsesta, Hosta: को बस्तियों मा न्यानो। जाडो को बीचमा हिउँ - एक असाधारण घटना, अधिक वर्षा। बादल दिन यो महिना, कुनै थप दस भन्दा।
रूपमा भीड र मजा, जुन मा साथै समुद्र तट मा सोची मा फेब्रुअरी। साँचो, रंगीन stalls shale, टवेल र पनामा बिक्री, को समतल प्रतिस्थापन, खेलकुद विषय संग न्यानो टोपी, पन्जा र गलबन्दी भरा टोपीको घेरा।
सूर्य बिरालोहरु को आसपास scurrying, तर समुद्र गर्न कहीं धेरै नजिक swoop gulls देखि निकास। पर्यटक फोटो कि सबै भन्दा राम्रो प्रमाण हो।
कुनै कम noisily र तटीय रेस्टुरेन्ट मा। तिनीहरूले Kebabs को निष्क्रिय राहगीरों-मसालेदार सुगन्ध लोभ्याए। अझै पनि आउटडोर कौसी र terraces खोल्नुहोस्।
एक साइकल र स्कूटर भाडा। Barkers कताई, डुङ्गा यात्राको गर्न आमन्त्रण, बच्चाहरु लागि काराउजेल स्पिन।
को "रिवेरा" मा मनोरंजन को लागि
को Seafront मा आकर्षण अचानक एक सानो जस्तो भने, "रिवेरा" जान स्वतन्त्र महसुस। यो सबै वर्ष दौर संचालित जो शहर, को केन्द्रीय पार्क छ। सोची, पानी स्लाइडहरू मात्र फेब्रुअरी बन्द।
रोटेपिङ्, साथै गर्मी, नथाकीकन नीलो आकाश काकेशस पातालमा बाँकी uplifts। "समुद्री डाकू पोत" रोमाञ्चक र dizzying साहसिक को संसारमा बच्चाहरु लाग्छ।
साङ्लाले बाँधेर काराउजेल बहु-रंग ponies, गधाहरूमाथि र हात्ती सुरुचिपूर्ण वाहनो मा harnessed को टाउको गर्दछ। बच्चाहरु रंगीन "शुभ locomotive," squealing वाहनो मा चढेर र घोडाहरू मा झूल हाँस्न inflatable trampolines खेल।
मल मा किनमेल "Moremoll"
सेकेन्ड "Moremoll" - शहर को सबै भन्दा ठूलो सपिङ्ग सेन्टर। फेब्रुअरी सोची, यो शान्त र भीड छ। किनमेल केन्द्र एक rivulet को बैंकहरू मा स्थित छ, Sochinka दुई thoroughfares को चौराहे भनिन्छ स्थान मा, सडकमा Tchaikovsky र डन।
किनमेल जटिल धेरै फर्श मा बुटीक र पसलहरूमा, क्याफेहरू र इंटरनेट एक्सेस दर्जनौँ स्थित छ। "Moremoll" - यो क्षेत्रमा खराब मौसम घडी, जो कुनै-कुनै, र आगन्तुक पास गर्न ठूलो विकल्प। सप्ताहन्तमा मा, यो तिर्थयात्रा को हर एक ठाँउ पर्यटकहरु र बासिन्दा मात्र होइन एक ठाउँ बन्दछ।
सोची राष्ट्रिय निकुञ्ज
सोची राष्ट्रिय निकुञ्ज, यात्री को धेरै समीक्षा अनुसार - आवश्यक फेब्रुअरी सोची मा भ्रमण योजना, मार्ग समावेश हुनुपर्छ जो अर्को बिन्दु।
यसको क्षेत्र प्रसिद्ध Vorontsov towering पहाड मा, गहिराइमा कुन को आँखा रहस्यमय गुफाहरु prying लुकेका छन्। पनि हिउँदमा तपाईं, जंगली तेंदुआ देख्न सक्नुहुन्छ पतंग आकाश मा soaring, साक्षी भैंसिहरु को चिन्तन आनन्द।
चरा सयौं मनोरम storks सहित पार्क मा फेला परेन। पर्यटन अनुभवी गाइड द्वारा आयोजित छन्।
Arboretum सोची राष्ट्रिय निकुञ्ज एक संरचनात्मक एकाइ को भाग हो। एक कारण स्थानीय प्रकृति रिजर्व मा पैदल यात्रा हरेस - शहर वसोवास सोची जाडो भन्छन्।
को Arboretum को हृदय - हंस पोखरी। मनोरम चरा यसको हिउँ-सेतो पक्षति संग दर्शकहरुको delighting, आफ्नो घर छोड्न कहिल्यै।
संग Arboretum को बाटो सबै दिन लामो उपलब्ध छन् पनि फेब्रुअरी लक्षविना हिड्नु गर्न। को आरक्षित मा Oaks, खजुरका, cypresses, पाइन रूखहरू र कैक्टस बढ्न। को तालाब नजिकै सर्गेई Nikolaevich Khudekov विला, पार्क को उत्पत्तिभन्दा बुबा खडा।
SkyPark माथिको rises नदी Mzimta। तपाईं फेब्रुअरी सोची मा छुट्टी मा जाँदैछन् भने, आफैलाई bird's-आँखा दृश्य गर्न काकेशस हिमालहरूको तलहटी मा हेर्न खुशी अस्वीकार छैन।
अत्युक्ति बिना जो देखि, हृदय रोक्छ, बस आकर्षण चार - यो प्रदान गर्दछ। यी सबैभन्दा सबैलाई ज्ञात जुन "बंजी", हो। तर तिनीहरू यहाँ बस घाटी मा, जो घुम्ने तुवालो को भुमरीमा अड्किनुहोस्।
"ओलम्पिक पार्क", वा "Imereti रिसोर्ट" - पछिल्लो स्टेशन "Swallows", Tuapse र सोची देखि निम्न। ओलम्पिक पार्क मा मौसम बिना प्रतियोगिताहरु, संगीत र पनि प्रदर्शन होस्ट।
खेलकुद सुविधाहरु देखि केही मिनेट पार्क "दक्षिणी संस्कृति", सोची राष्ट्रीय रिजर्व अर्को विभाजनको सीमाहरु फैलयो थिए।
सम्पदा मा यात्राहरु हामीलाई 2014 मा शीतकालीन खेल बाँया पछि, खुट्टा र बिजुली वाहन मा दुवै आयोजित। अनुभवी यात्री नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्न वा साइकिल किराए सल्लाह छन्।
"सोची पार्क" युरोप मा सबै भन्दा ठूलो मनोरञ्जन केन्द्र हो। यो ओलम्पिक स्टेडियम अर्को स्थित छ र यसको आकर्षण काला सागर को तट देखि देख्न सकिन्छ।
समीक्षा द्वारा न्याय, को आगंतुकों बीचमा सबैभन्दा ठूलो माग "क्वान्टम Leap" हो, "ड्रागन", "Firebird", "Sharolet", "Drifter" र गत वर्ष खुलेको, एक रोटेपिङ्।
सोची जाडो गएर बाटो, गरेर, तपाईं पनि पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। को "सोची पार्क" को लागि टिकट धेरै सस्ता खर्च हुनेछ! तपाईं एक अतिरिक्त छुट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? आधिकारिक वेबसाइटमा एक टिकट बाहिर गर्नुहोस्।
फेब्रुअरी सोची सबैभन्दा रोचक र स्मरणीय घटना सबै स्की रिसोर्ट "रोजा Khutor" मा केन्द्रित। यो हिमाल मा उच्च स्थित छ। राम्रो प्राप्त यहाँ बिजुली रेल "Swallow" मा।
उच्च सिजन सिद्ध अवस्थामा सधैं छ हिउँ चुचुराहरूको, सेवा आधुनिक केबल कार र लिफ्टहरु।
घटनाहरू मा धनी यी ठाउँमा फरवरी। किन मात्र म्याराथन RosaRun, प्रणय दिवस को उत्सव, को संरक्षण अन्तर्गत आयोजित छ जो तिहार, यूरी Bashmet।
मध्य-फरवरी, "रोजा Khutor" आयोजना आफ्नो पाहुनाहरूलाई स्की रिसोर्ट को व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष एक जाडो शिविरमा हिम शिविर। मास्टर कक्षाहरू, कार्यशालाओं, को BBQ पार्टी, दल, यात्रा को आफ्नो कार्यक्रमको भागको रूपमा, स्की स्कूल संचालित।
विजय पार्क (Sevastopol), स्थान, समीक्षा, फोटो
रेस्टुरेन्ट टुला मा "टावर": भित्री, मेनु, यसको आफ्नै भठ्ठी
सबै भन्दा लोकप्रिय पानी Cascades Khosta सोची को जिल्ला। Orekhovskiy र Zmeykovsky फल्स
इजरायल, ख्रीष्टियन पवित्र स्थानहरू: एक सिंहावलोकन, इतिहास र समीक्षा
सबैभन्दा बुडापेस्ट संग्रहालयहरु विवरण
हावा को गर्मी
पनीर बन्स: को नुस्खा। पनीर रोल काल्पनिक नरम कसरी खाना पकाउनु
परिवार मनोवैज्ञानिक लारिसा Surkov: जीवनी
तालिका "मानव मामलामा बिरालोहरु को आयु।" बिरालो को उमेर कसरी निर्धारण गर्ने?
Hemorrhagic सिंड्रोम: लक्षण र उपचार
सही महिलाको पोशाक कसरी किन्ने?
हो कि राम्रो छैन3प्रश्न साक्षात्कार मा सोध्न
पर्खाल को मोटाई। इँटा वा ब्लक बनेको पर्खाल न्यूनतम मोटाइ